Wax kaga qabashada Foosha Lagu Dhibtooda Wardheer oo ah degaan fog oo ka tirsan Itoobiya – Waxaa ka Sheekeyneysa Umuliso - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
“Waxa aan ka shaqeeyey Wardheer, oo ah degaan aad u fog oo ka tirsan Gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya, halkaas oo aaney ka jirin cusbitaallo si buuxda u qalabeysan, dhakhaatiir-qalliin ama saalooyinka qalliinka lagu fuliyo. Qalabka ay dhakhaatiirtu wax ku dhegeystaan (stethoscope) iyo xoogaa qalab la-jeermis dile ah ayaan ku shaqeeyaa anniga oo ah umuliso u shaqeysa ururka Médecins Sans Frontières (MSF). Marka ay haweeney uur leh oo dhibaatooyin foosha la xiriira oo halis gelin kara nafteeda iyo ilmaha ay siddo la keeno, kooxdeyda – oo ka kooban shaqaale dalka u dhashey iyo kuwo caalami ah waxa uu midkoodba ku tiirsanaadaa waayo-aragnimada iyo xirfadaha ay kuwa kale leeyihiin si loo qiimeeyo sida si guul leh looga umulin karo mid kasta oo ka mid ah haweenka uurka leh ee la keeno.
“Habeen ayaa aniga oo hurda ku toosey la iiga yeeray soo direy xarunta caafimaadka. Haweeney ayaa foolatey oo ayna la soo derseen dhibaatooyin foosha la xiriira. Ilmihii ayaa ka soo bixi waayey, oo markii aan gaarey qolka ka-umulintana waxaan tegey iyada oo aan waxba isbeddelin. Markii aan eegey hooyada ayaan ogaadey in ilmaha uurka ku jira uu ku xayirmey miskaheeda isaga oo gacmihiisa iyo garbihiisuna ay ka soo horreeyaan madaxiisa – kaas oo ah qaab aanu ilmaha u soo mari karin marinka dhalmada. Dalka Jarmalka, oo aan ka imid, ayaa haddii arrintan oo kale ay dhacdo ay dhakhaatiirtu islamarkiiba ay hooyada qalliin ugaga dhalin lahaayeen. Halkaanse, degaanka Wardheer, oo ah dhul ay rabshad saameysey, ayaa adeegyada caafimaadku ay ku yar yihiin mana lahan saalo qalliin, dhakhtar qalliin ama suuxiye, sidaa daraaddeed qalliin-kaga-dhalin lama sameyn karo.
“Marka ay arrintu sidan tahay, ma jirto wax kale oo aan sameeyo oo aan ka ahayn habraac aad u xanuujinaya hooyada: oo ah in aan ilmaha dib ugu riixo ilmo-galeenka. Markii aan sidaas yeeley, ayaa ilmihii uu awood u yeeshay in uu dhaqaajiyo gacmihiisa waxaana 20 daqiiqo kadibna, waxaan gacmaheyga ku hayey ilmo caafimaad qaba oo hadda dhashey. Maaddaama ay hooyadu iska fiicneyd, waxaa ay awooddey in ay gurigeeda ku noqoto ka dib dhowr saacadood oo keliya.
“Degaankan oo ah mid fog, ayaa keliya 3.8 boqolkiiba ay haweenku helaan daryeelka ka horreeya dhalmada (marka la barbardhigo 42.1 boqolkiiba ay daryeelkaa ku helaan dalka oo dhan) iyo keliya 2.6 boqolkiiba oo ay ka umuliyaan xirfadlayaal caafimaad (marka la barbardhigo 12.4 boqolkiiba ay tahay tan dalka oo dhan). Badi haweenku waxaa ay carruurta ku dhalaan guryahooda. Waxa ay xarunta caafimaadka yimaadaan oo keliya marka ay wax khaldamaan oo ay foosha ku dhibtoodaan. Waxa barnaamijyadeenna aan dadka degaannadooda ku booqanno ku dhiirrigelin jirney daryeelka ka horreeya dhalmada waxaana aan arkeynaa in haween uur leh oo mar kasta tiradoodu sii kordheyso ay u imanayaan baaritaanka ka horreeya dhalmada, arrintanna waxaa sabab u ah wacyigelinteenna. Marka ay haweenku soo booqdaan, ayaa kooxdeenna oo ka kooban shan umuliso ay sameynayaan baaritaan guud oo ka horreeya dhalmada, waxa ay ka baaraan dhiig-kar, waxa ay siiyaan taageero nafaqeyn waxaana ay ka daweeyaan xanuunada ay qabaan.
“Waxaa shantii bilood ee aan ka shaqeynayey Wardheer howsheyda ka mid ahayd in aan aqoon-is-weydaarsiyo u qabanqaabiyo umuliso-dhaqmeedyada, oo ah kuwa ka umuliya inta badan haweenka degaanka. Aqoon-is-weydaarsiyadan ayaa mar walba ah kuwo aan dhammaanteen ka helno waayo-aragnimo qiimo badan. Waxaa jirey tijaabo dhab ahaan loo sameeyo oo lagu tababarto sida gacmahaaga loogu dareemo qaabka uu u yaallo ilmaha uurka ku jira; sida hooyada looga gargaaro nabarrada foosha; waxaana aan wadaagnaa tabaha loo beddelo habka uu u yaallo ilmaha. Waxa aan ku celcelinaa si loo barto sida wax looga qabto xaaladaha degdegga ah, tusaale ahaan, haddii ilmaha garabkiisa uu ku xirmo miskaha hooyada, siyaabaha kala duwan ee wax looga qaban karo – waa siyaabo la fulin karo oo si fududna loo baran karo – dhaqdhaqaaqyada la sameyn karo si ilmaha loo toosiyo iyada oo aan madaxiisa la soo jiidin.
“Wardheer oo ay ku yar yihiin adeegyada caafimaadka, ayaa haween badan waxaa soo wajaha ilmodhalis aad u halis badan oon laga baaqsan karey iyada oo taasna ay sababtey jiritaan la’aanta daryeelka dhalmada ka horreeya iyo gargaar caafimaad oo wax loogu qabto haweenka foosha ku dhibtooda, iyo sidoo kale jiritaanka dhibatooyin caafimaad oo kala duwan. Xarunteenna caafimaadku waxa ay qayb yar ka tahay dadaal badan ee halkaas looga baahan yahay. Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan hawshaas wax ka galey iyo waayo-aragnimadii aan ka heley.”